यसलाई राजनीतिक फैसलाको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन : विष्णु पौडेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
'फैसला हाम्रा निम्ति सरप्राइज नै भयो । हामी पार्टी एकता गरेर अघि बढेका थियौं । बीचमा मुद्दा पर्‍यो । अहिले हामी मुद्दा हार्ने पक्ष भएका छौं ।'
काठमाडौँ — नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार गरेको फैसलाले अनेक कानुनी र राजनीतिक प्रश्न जन्माइदिएको छ । फैसलाले एकताबद्ध भईवरी पुनः नयाँ खालको ध्रुवीकरणसहित विभाजित भइसकेको दललाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको छ ।
अब तत्कालीन एमाले पार्टी कसरी अघि बढ्छ ? यसै सन्दर्भमा तत्कालीन एमालेका उपमहासचिव र साविकको नेकपाका महासचिवसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :
सर्वोच्च अदालतले दलको नामको विवादसम्बन्धी फैसला गर्‍यो । अब नेकपा नामको तपाईंहरूको दल अस्तित्वमा छ कि छैन ?
फैसलासँगै नेकपाको अस्तित्व समाप्त भयो । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको फैसलामा प्रस्ट छ । त्यसैले नेकपा बाँकी रहेन ।
तपाईंहरूको एकीकृत पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने फैसलालाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
फैसला हाम्रा निम्ति सरप्राइज नै भयो । हामी पार्टी एकता गरेर अघि बढेका थियौं । बीचमा मुद्दा पर्‍यो । अहिले हामी मुद्दा हार्ने पक्ष भएका छौं ।
नामको विवाद थियो तर अदालतले त एकीकरण प्रक्रियामै प्रवेश गरेर फैसला गरिदियो नि, नमागेको विषयमा अदालतले यसरी फैसला गर्न मिल्छ ?
कुनै निर्णय मन पर्दा ‘सर्वोच्च अदालतकी जय’ भन्ने, कुनै मन नपरे सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विरोध गर्ने हाम्रोमा यो खालको प्रचलन छ । हामीले अस्ति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्‍यौं, त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो । फैसला हाम्रो प्रतिकूल आयो । हार्दा पनि हामीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ठिकै छ, हामी मान्छौं भन्यौं । अहिले पनि कुरा त्यस्तै हो । त्यसैले मन पर्दा अदालतको प्रशंसा गर्ने अनि मन नपर्दा विरोध गर्ने गर्नुहुँदैन ।
यो मुद्दामा त अदालतले राजनीतिक खालको फैसला गर्‍यो नि, नामको विवाद निरूपण गर्दा एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुर्‍याउने फैसला सिधै राजनीतिक खालको छैन र ?
फैसलाको फुल टेक्स्ट पढेपछि यसबारेमा बढ्ता भन्न सकिन्छ तर मलाई के लाग्छ भने, यस्ता विवादमा निर्णय दिने न्यायालयले हो । त्यसैले अदालतले पनि राजनीतिक उद्देश्यबाट निर्देशित भएर निर्णय गर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । यसलाई राजनीतिक फैसलाको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । नामको विवाद टुंग्याएर हामी एकताबद्ध भएरै जान्छौं भन्दा त सर्वोच्च अदालतले तिमीहरू एकीकृत भएर जान पाउँदैनौ भनेको छैन नि । त्यसैले यसलाई त्यो रूपमा लिनु हुँदैन ।
यो फैसलाले तपाईंहरूको नेकपाको आन्तरिक विवाद सल्टाउन सहजीकरण गरेको हो ?
फैसलाले एकता वा एकीकरणको प्रक्रियामा परिपक्व तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा अनुभव दियो । राजनीतिक, संगठनात्मक, कानुनी र संवैधानिक ढंगले पनि परिपक्व निर्णय गर्नुपर्ने विषय रहेछ भन्ने देखिएको छ । यसले एउटा अनुभव दिएको छ । परिपक्व आधार तयार भएपछि एकताको काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि पाठ सिकाएको छ ।
अब दुइटा पार्टीको अस्तित्व जेठ ३ भन्दा अघिको अवस्थामा पुगेको हो ?
फैसला हेर्दा २०७५ जेठ ३ भन्दा अघि पुगेकै हो ।
अब एमाले कसरी र माओवादी केन्द्र कसरी अघि बढ्छन् त ?
पहिले त दुइटा पार्टी हुने भए । तिनले आपसी छलफल गर्न सक्ने भए । फेरि पनि एकताबद्ध भएर जाऔं भन्ने हो भने एकताबद्ध भएर जान पनि सक्ने भए । एकताबद्ध भएर जाने ठाउँ जहिले पनि रहन्छ तर हिजोका जस्ता कमजोरीलाई ठाउँ दिनुभएन ।
प्रधानमन्त्री एकल बहुमतप्राप्त दलको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँको स्टाटसचाहिँ के भयो त ?
हामीले निर्वाचनपछि संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको संयुक्त सरकार बनाएका थियौं, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभएको हो । पछि पार्टी एकीकरण भएपछि संविधानको धारा ७६(१) बमोजिमको सरकारमा रूपान्तरित भएको थियो । हामीले निर्वाचन आयोगमा पनि नोटिस गरेका थियौं, आयोगले पनि ७६(१) अनुसारको सरकार मानेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि मानेको थियो । अहिले ७६(२) अनुसारको सरकार छ । त्यतिबेला नै विश्वासको मत लिएकाले अब विश्वासको मत लिइराख्नुपर्दैन ।
अब प्रचण्डजीहरू (नेकपा माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयमा संसदीय दलको बैठकमा भनिसक्नुभएको छ, ‘नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा म तत्काल विश्वासको मत लिन्छु ।’
संसदीय अंकगणित एउटा कुरा होला तर राजनीतिमा त नैतिकताको पनि ठूलो अर्थ हुन्छ नि, राजनीतिक रूपमा विश्वास गुमेको प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा अब पनि राजीनामा नदिई बस्न मिल्छ र ?
यो त्यस्तो विषय होइन । सर्वोच्च अदालतले नेकपा कायम छ/छैन भन्ने विषय कानुनसम्मत छ/छैन भनेर फैसला दिएको हो, अरू विषयमा जोडिँदैन ।
एमालेकै असन्तुष्ट नेताहरूको अवस्था अब के हुन्छ त ?
मलाई के लाग्छ भने सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको कुनै विषय नै भएन । अदालतले फैसला गरेपछि अब एउटै दलमा बस्ने, आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई त्यहीं छलफलको विषय बनाउने र एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने हो । असन्तुष्ट भएँ भनेर अलग बस्नु पर्दैन ।
नेकपाको हैसियतमा चुनाव लडेका सांसदसहितका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँहरूले एमाले वा माओवादी केन्द्रबाट जित्नुभएको होइन । नेकपाको नाममा जित्नुभएको हो । अब उहाँहरूको हैसियत के हुन्छ ?
नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्रबाट जित्नुभएको होइन भनेपछि उहाँहरूले स्वतन्त्र ढंगले जित्नुभएको हो भन्ने मान्नुपर्‍यो । त्यस्ता व्यक्तिहरू स्वतन्त्र नै रहन सक्नुहुन्छ वा कुनै दलमा आबद्ध हुन पनि सक्नुहुन्छ । यहाँ अर्को कुरा के बुझ्नुपर्नेछ भने उहाँहरूले नेकपाको नामबाट चुनाव लड्दा सूर्य चिह्न प्रयोग गर्नुभएको छ । त्यसैले सूर्य चिह्न अब एमालेसँग हुने भएकाले उहाँहरू स्वतः एमाले दलतर्फको जनप्रतिनिधिका रूपमा रहनुहुन्छ ।
नेकपा एमालेको स्टाटसमा कुन खालका गतिविधि अघि बढ्छन् ?
अब पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक तुरुन्तै आयोजना गर्छौं । संसदीय दलको बैठक पनि नियमित रूपमा बस्छ । जो साथीहरू विभिन्न कारणले असन्तुष्ट भएर प्रचण्डजीको पछि लाग्नुभयो, उहाँहरूलाई आफ्ना असन्तुष्टि र असहमतिहरू पार्टीभित्रै राखेर, छलफल गरेर अगाडि बढ्ने स्पेस खाली छ । पार्टीमा एकताबद्ध भएर गतिशील हुनका लागि आग्रह गर्छु ।
असन्तुष्टहरू एमाले छोडेर माओवादी केन्द्रमा जान चाहनुभयो भने के हुन्छ ?
त्यस्तो बेला कारबाही गर्नुपर्दैन, स्वतः पदमुक्त हुन्छ । जनप्रतिनिधि भए जनप्रतिनिधिबाट, पार्टीको भए पार्टीबाट स्वतः पदमुक्त हुन्छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०९:२५
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक अवरुद्ध
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहद्वारा बहिष्कार
कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश नमान्ने
सरकारले शासन गर्ने वैधता गुमाएको सांसदहरुको भनाइ
फाल्गुन २४, २०७७ ऋषिराम पौड्याल
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै कांग्रेस सांसद । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले संविधानविपरीत विघटन भएको प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाले संवैधानिक मूल्यमान्यताको कदर भएको बताइन् । सर्वोच्चको निर्णयको स्वागत गर्दै उनले पहिलो बैठकमै सांसदहरू बाहिर गएको भन्दै त्यस्तो परिस्थिति बन्न नहुने बताइन् । उनले तीन वर्षसम्म उपसभामुख निर्वाचित नगरेको भन्दै यसबाट नेतृत्वमाथि नै चुनौती खडा भएको बताइन् । संसद्को भावनाविपरीत संवैधानिक परिषद्‌मा नियुक्ति गरिएको भन्दै त्यसप्रति उनले आपत्ति जनाइन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०८:५५